IGoogle Allo ivala iingcango zayo ngokusisigxina namhlanje | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UGoogle Allo uthi ndlela-ntle namhlanje ngokuqinisekileyo
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo ukuvalwa kweGoogle Allo kwaqinisekiswa, Inkqubo yemiyalezo kaGoogle. Izicelo zokuthumela imiyalezo yinto inkampani yaseMelika engazange igqibe ukuphumelela ngayo. Isampulu enye kule meko. Namhlanje kweyoKwindla 12 sithi ndlela-ntle kule app ngokusemthethweni. Ngenxa yokuba ngumhla wokugqibela oza kusebenza.
UGoogle Allo akazange agqibe ukujija phakathi kwabasebenzisi kwi-Android. Esi sesona sizathu sokuba esi sicelo sithi ndlela ntle kwintengiso. Ukuthandwa okuphantsi, ngenxa yokhuphiswano olukhulu kweli candelo, kuye kwathetha ukuba usetyenziso alunanto kwimarike.
Kubasebenzisi abaneakhawunti kwisicelo, kusenokwenzeka ukufikelela kuyo. Ke ukuba unefoto, incoko okanye iifayile kuyo ofuna ukuyikhuphela, kusenokwenzeka ukwenza oku. Kodwa yinto ekufuneka uyikhawulezele. Ngaphandle koko, ngekhe ukwenze oko.
Sele siyichazile indlela ekwenziwa ngayo oku, ungafunda njani apha. Ngele ndlela, uya kuba nazo zonke ezo fayile okanye iifoto ezisekwiGoogle Allo kwaye ufuna ukuba yintoni, kwifowuni yakho ye-Android. Kukuthintela ekuphulukaneni nedatha esele ithethiwe. Oku kufuneka kwenziwe ngaphambi kobusuku bobusuku nangona kunjalo.
Nangona sithe ndlela-ntle kuGoogle Allo, oko akuthethi ukuba sithi ndlela-ntle kwizicelo zemiyalezo. Kuba uGoogle uceba ukwenza entsha, eya kuthi iphume kwiiHangouts, ikwalungiselela yithi kungekudala ngokukhawuleza Ukusuka kwimarike. Utshintsho oluninzi kule nkampani yinkampani.
Kodwa kule meko, iapps ekufuneka siyithethileyo yiGoogle Allo. Ke ngoko, abasebenzisi abaneakhawunti banokuyifumana, ukuba kunokwenzeka ufuna ukukhuphela idatha kuloo akhawunti. Ukuba kunjalo, khawuleza, kuba kunokwenzeka kuphela namhlanje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » UGoogle Allo uthi ndlela-ntle namhlanje ngokuqinisekileyo
Khuphela uMqalisi oMnyama, Isiqalisi esingasindi simahla kuphela iiyure ezingama-24